Kupera ne Photoreading. Iwo maviri ekupedzisira matanho enzira | Linux Vakapindwa muropa
Kupera ne Photoreading. Matanho maviri ekupedzisira
Mune ino ichangoburwa chinyorwa na akateedzana nezve Photoreading, ngatiitei pindurai mibvunzo yatazvibvunza pamusoro penyaya yatakatora mifananidzo uchishandisa nzira yakanzi nemusiki wayo kuverenga zvakanyanya. Tevere tichaona mamwe maturusi ku inomiririra nenzira yakapfupikiswa uye inowanikwa nyore kana tichifanira kuzviongorora.
Ipapo tinopedzisa maitiro kutora nekukurumidza kutarisa izvo zvinyorwa kutarisa kana tisina kukanganwa chero chinhu.
1 Kupera ne Photoreading. Super Read uye Fast Read
1.2 Sans Forgetica
1.3 Kurumidza kuverenga
Tkupera ne Photoreading. Super Read uye Fast Read
Unyanzvi hwekuverenga inosanganisira kufambisa maonero pamusoro pezvinyorwa nenzira imwechete iyo ndege inobhururuka pamusoro penzvimbo. Mumatanho apfuura kare isu tinowana maitiro aripo ebhuku uye takazviita mamaki pazvikamu zvataifunga kuti zvakakosha. Zvinoenderana neizvi zvinoonekwa uye neruzivo rwunosanganisirwa kuburikidza nemaitiro ekuverenga Photo, isu tinonzwa kuda kumira pane zvimwe zvikamu zvechinyorwa tonyatsoverenga.
Unyanzvi hunobatsira kuita kuti kuverenga kuve nyore iko kuchinja kwe typeface. Typography, matsime ezvishongo zvivezwa zvinoburitsa mvura. Ose maWindows neLinux vane vabatsiri vanoisa mafonti matsva nekudzvanya kaviri pafaira. Ipapo isu tinongofanirwa kuvasarudza ivo muchirongwa chekugadzirisa icho chatinoshandisa.
Mafonti maviri akakurudzirwa ndeaya:
Dyslexia iko kushandurwa kwekugona kuverenga uko iko kurongeka kwetsamba, syllables kana mazwi akavhiringika kana kuchinjwa Rudzi rwe typeface yakagadzirirwa kudzikisira shanduko iyi zvakare inoita kuti zvive nyore kune avo vasina iyo kuti vaverenge.
OpenDislexic inowanikwa pasi peyakavanzika yakavhurwa sosi rezinesi yemafonti. Iyo ine Mono vhezheni (yakagadzika hupamhi yakakosha yekunyora uye kuverenga kodhi) uye vhezheni inowanikwa mune yenguva dzose uye yakashinga. Ivo vanogona kutorwa mukati.
Unogona kurodhaunura mahara kubva pano. Asi kana iwe uchida kupa kune iyo projekiti mukuwedzera kune kurodha pasi, unogona kuzviita pa peji rino.
Iyo typeface yakagadzirirwa kushandisa misimboti yekuziva kwepfungwa kubatsira vadzidzi zvirinani kurangarira zvekufunda. Iyo yakasikwa neye multidisciplinary timu yevagadziri uye hunhu masayendisiti kubva kuRMIT University.
Tinogona kurodha pasi iyi font kubva yavo webhusaiti uye isai zvakajairika. Zvakare zviripo kuwedzera yeiyo Chrome browser inoitsiva neyeiyo yekutanga yemasaiti atinoshanyira.
Zvinyorwa zvekudzidza zvine ruzivo rwakawanda rwatisingade. Izvo zvinoita zviri nyore kuita pfupiso yezvatiri chaizvo kushandisa kufambisa kuongororwa kwenguva nenguva.
Panzvimbo pekupfupikiswa kwemavara, nyanzvi dzezvedzidzo dzinokurudzira kushandisa maturusi akadai semamepu epfungwa kana mepu dzepfungwa
Mepu yekufungidzira: Ndezve dhayagiramu inoita kuti musoro unzwisisike uye kurangarira nemifananidzo inomiririra hukama pakati pemifungo nepfungwa. Pfungwa dzinomiririrwa munzvimbo dzakarongeka uye dzakabatana nemazwi anobatanidza pamitsara kutsanangura hukama.
Kunyangwe paine zvishandiso zvakawanda zvinotibvumidza isu kuti tizvigadzire, chandinofarira ndeche Xournal ++.
Ichi chirongwa chinotibvumidza shandisa Monitor screen sekunge tanga tichinyora kana kudhirowa pabepa. Kunyangwe ichitsigira kushandiswa kwetafura yemifananidzo, inoshanda zvakakwana nekhibhodi uye mbeva.
Zvekugadzirwa kwemadigiramu isu tine zvishandiso zvine zvimiro zvakafanorongedzwa senge zvikwere uye madenderedzwa. Tinogona zvakare kuvakwevera vakasununguka uye chirongwa chinozoziva nekukweva chimiro nenzira kwayo.
Xournal ++ inogona kuiswa kubva chitoro cheFlatPak.
Kana iwe uchida chimwe chinhu chine preset parameter, muverengi wedu Mariano akakurudzira Semantik.
Mamepu epfungwa: Zvakawanda zvinonakidza kupfuura mepu dzepfungwa, mepu dzepfungwa zvinomiririra hukama pakati pemafungiro uchishandisa akawanda mavara uye mifananidzo. Mufananidzo uri pamusoro wechinyorwa muenzaniso wakanaka.
Kune akatiwandei akavhurika sosi maturusi ekugadzira epfungwa mepu. Ndeipi ine akanakisa zvinyorwa (kusanganisira akati wandei mabhuku) iri freemind. Ichi chirongwa chine akawanda mawedzero-anowedzera ayo mashandiro.
Nekuti yakanyorwa muJava, inogona kushandiswa pane chero sisitimu yekushandisa iyo ine Java chaiyo muchina wakaiswa. Iko zvakare kune sarudzo yekuisa iyo kubva kumatura ezvikamu zvakasiyana kana kubva chitoro.
Iyi yekupedzisira nhanho iri nyore tsika yekuverenga yechinyakare (kuruboshwe kurudyi uye kumusoro kusvika pasi) asi uchishandisa mafekitori ekugadzirisa inokurudzirwa netsika dzechinyakare kuverenga nzira. Isu tinongomisa kumhanya kana isu tawana chimwe chinhu chinotibata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kupera ne Photoreading. Matanho maviri ekupedzisira
Prehistory yegore. Tasvika sei pano
Chikamu chekumisikidza mu Photoreading. Android openource kunyorera kuzviita